Okuhlekisayo | RayHaber
IkhayasesitimelaKENTİÇİ Rail SystemsFunicular
Ukuhamba kwamahhala komphakathi e-Istanbul ngoSuku lweRiphabhliki
Ukuhamba kwamahhala komphakathi e-Istanbul ngoSuku lweRiphabhliki. I-29 ka-Okthoba Republic Day's 96. I-IMM ilungiselele ukugubha unyaka ngemikhosi ekhazimulayo, ezokuthutha zomphakathi kuleli holide likazwelonke zinqume ukuhlinzeka ngemisebenzi yamahhala. Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) [Okuningi ...]
I-Istanbul's Rail Systems iseTafuleni!
Umasipala wase-Istanbul Metropolitan ubambe indawo yokusebenzela Rail Systems Workshop lapho kwaba khona ukubamba iqhaza okubanzi kusuka kwizazi kuya kubamele abamele imikhakha. Lo mshophi wagxila emsebenzini owenziwe kuze kube manje ezinhlelweni zesitimela e-Istanbul nezinyathelo ezizothathwa ngemuva kwalokho. [Okuningi ...]
Isaphulelo i-Istanbulkart yabafundi abangakwazi ukuwina iYunivesithi
Isibalo sezokuhamba esincishisiwe siqale ngesinyathelo sikaMongameli we-İBB u-Ekrem İmamoğlu sandisiwe. Umkhandlu we-IMM uthathe isinqumo sokuthi abafundi abangakwazi ukuhlala emnyangweni wezivivinyo zasenyuvesi nothisha abasebenza ngaphansi kwenkontileka eMnyangweni wezeMfundo bazohlomula ngekhadi eliluhlisiwe. [Okuningi ...]
Izikole Zavulwa E-Istanbul, Akukho Siphithiphithi Sezimoto
E-Istanbul, cishe abafundi abayizigidi ze-3 kanye nothisha abacishe babe yinkulungwane ye-200 benze ukuqala kwamakilasi namuhla. Edolobheni okukhona kulo izithuthi zomphakathi mahhala, kuhlinzekwa izimoto zokusiza ukuthwala abazali. Izakhamizi, uMongameli we-İBB u-Ekrem İmamoğlu'nun [Okuningi ...]
I-9, evula izikole, izohlinzeka ngemisebenzi yokuhamba mahhala yomphakathi e-Istanbul ngoSepthemba uMsombuluko phakathi kwe-06: 00 - 14: amahora we-00. I-2019-2020 Unyaka wesikole u-9 Septhemba 2019 uqala ngoMsombuluko. Abantu abayizigidi ze-16 [Okuningi ...]
I-IMM Inxusa Ukuhamba Komphakathi Ngokumelana Nethrafikhi Yesikole
UMengameli we-Istanbul Metropolitan (IMM) u-2019-2020 uMengameli u-Ekrem İmamoğlu echaza ngezinyathelo ezithathwe kulo nyaka wezemfundo, ezokuhamba zomphakathi zizohlinzeka ngemisebenzi yamahhala nezimoto zenkonzo zizothwala abazali abafuna usuku lokuqala, kusho yena. izakhamuzi [Okuningi ...]
I-Istanbul Ithrafikhi Ilungele Unyaka Omusha Wezemfundo
I-9, lapho kuzoqala khona unyaka omusha wezemfundo e-Istanbul, ukuthathwa ukuze kuvinjelwe izinkinga zomgwaqo ngoMsombuluko. I-IMM, ukuphepha kanye ne-Gendarmerie zizosebenzisana ukuqinisekisa ukuhamba kwezimoto. I-06: 00-14: Ubuningi phakathi kwamahora we-00 [Okuningi ...]
Ukuhamba Komphakathi e-Istanbul 30 Mahhala ngo-Agasti
Imigubho yoSuku lokuNqoba i30 Agasti, izimoto zokuhamba zomphakathi e-Istanbul zizothwala abagibeli mahhala. Ngokusho kuka-Istanbul Metropolitan Municipality (IMM), ukunqoba okukhulu kwe97. ezingxenyeni eziningi zedolobha ukuzogubha [Okuningi ...]
Izakhamizi zase-Istanbul zifuna i-IETT neMetro ukuthi zisebenze i-24
Ukuntuleka kwemigqa yebhasi eyabiwe yi-IETT ethi i-24 izosebenza amahora amaningi nokuthi iningi lawo yimigqa yesikhumulo sezindiza eqoqekile. Yize iMegakent Istanbul iyidolobha eliphilayo ebusuku, izinto zokuhamba zomphakathi zitholakala ebusuku. [Okuningi ...]
Ingabe iBayramda Bus, Metro, Marmaray Free e-Istanbul? I-Eid al-Adha Ingabe i-2019 yokuThutha koMphakathi Mahhala?
Isinqumo esithathwe yi-Istanbul Metropolitan Municipality Assembly mayelana nesiphakamiso sikaMongameli Ekrem İmamoğlu sizohlinzeka ngezinsizakalo zokuhamba umphakathi mahhala e-Istanbul ngoSuku Lokunqoba kanye Nosuku Lokunqoba ngo-Agasti 30. IETT, izakhamizi ukufinyelela kalula ezindaweni okuhlatshwa kuzo i-IMM [Okuningi ...]
UMasipala wase-Istanbul Metropolitan, i-Eid al-Adha, i-30 August Victory Day kanye nezikole zizovulwa ngoMsombuluko ngoSepthemba 9 zokuhamba zomphakathi e-Istanbul zinqume ukuhlinzeka ngemisebenzi yamahhala. Istanbul Metropolitan Municipality Assembly, IMM [Okuningi ...]
Ubude besistimu yesitimela e-Istanbul zizokwengezwa kuma-454 Millimeter
Lapho uhlelo lojantshi we-221,7 kilometer lakhiwa e-Istanbul, ubude bojantshi edolobheni buzofinyelela amakhilomitha we-233,05 ngesigaba esikhona se-454,75 kilometer. Ukubaluleka kohlelo lesitimela ukuze kuncishiswe ubunzima bethrafikhi ye-Istanbul [Okuningi ...]
Umthethonqubo omusha ku-Urban Rail Systems Uzophoqa Omasipala
Ngenkathi kusaba khona imiphumela yokulahleka kwe-AKP komasipala abaningi bamadolobha amakhulu, uhulumeni obusayo wenze uhlelo oluyisimanga mayelana nomasipala. Ngomthethonqubo omusha, ikakhulukazi omasipala bamadolobha amakhulu abakwazi ukwenza ibhizinisi cishe [Okuningi ...]
Incazelo mayelana nokukhubazeka nokuhambisana neKhadi le-Istanbul elikhutshaziwe
Ngenxa yesiphakamiso esayinwe phakathi kukaMnyango WezeMpilo noMasipala waseMetropolitan wase-Istanbul, "Abakhubazekile" kanye nama-Istanbulcards ahambisanayo kumele abhaliswe ohlelweni lweMnyango wezeMpilo ngaphambi kwenqubo ye-visa. Phakathi kukaMnyango wezeMpilo noMasipala waseMetropolitan wase-Istanbul [Okuningi ...]
I-15 3 yomzamo wokuketula ngoJulayi. Ngenxa yonyaka we-2015, izinsiza zokuhamba zomphakathi nezindiza zaseBaşkentray nezaseMarmaray kuzoba mahhala. 15 nomyalo sikaMongameli kunyatheliswe kuyi-Official kwiGazethi isiginesha uMongameli Turkey Recep Tayyip Erdogan [Okuningi ...]
Imisebenzi yenziwa emigwaqeni ehlukene ye-railway ye-17 kuhlanganisa i-metro, i-tram ne-funicular kuwo wonke i-Istanbul. Kule migqa ngobude bezinkulungwane zamakhilomitha angu-221,7, i-13 yi-Metropolitan Municipality kanye ne-4 yi-Transportation. [Okuningi ...]
I-6 Ukunciphisa Kwemoto Ye-Traffic e-Istanbul
Naphezu kokwanda kwabantu kanye nenani lezimoto njalo ngonyaka e-Istanbul, kuqinisekiswa abacwaningi bezizwe abazimele ukuthi ukutshala imali okwenziwa nguMasipala waseMelika Istanbul ngokuthutha kanye nezixazululo ezihlakaniphile kunciphisa kakhulu izinga lomgwaqo. emhlabeni [Okuningi ...]
Ukufinyelela kwe-Weekend yamahhala ku-Istanbul! IETT Kungezwe Isikhathi Esengeziwe
Ngokuhambisana nesinqumo esithathwe ngokungafani ngesicelo se-AK Party Group eMhlanganweni WeMetropolitan Municipality, i-YKS izobanjelwa ngempelasonto futhi ukuthutha umphakathi kuzoba mahhala kubahloli. Izinsuku ezimbili ku-IETT [Okuningi ...]
Ukuthuthwa Komphakathi Kwabafundi Ukufaka i-LGS e-Istanbul Free!
Zonke izimoto zokuthutha zomphakathi ngaphakathi komasipala waseMetropolitan Istanbul zikhokhelwa mahhala kubafundi abazovunyelwa kwi-Transition kuya High School Examination (LGS) kusasa [Okuningi ...]